Iqinisekisiwe: IGolden Fold yifowuni yokusonga ye-Samsung | I-Androidsis
Iselfowuni esongelayo yeSamsung iya kubizwa ngokuba yiGolden Fold
Namhlanje, kunye noluhlu lweGPS S10, Isamsung iza kubonisa ukusonga kwayo kwe-smartphone, njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Le smartphone inokuba yenye yezo zivelise uninzi lwezimvo kwiiveki ezidlulileyo. Ukongeza, sikwazile ukufumana idatha entsha malunga nayo kwi-CES 2019 ngoJanuwari. Nangona igama lomnxeba lihlala liyimfihlakalo.
Okokugqibela, sele sinegama esinokulindela kule modeli ye-Samsung. Njengoko bekukho amarhe ngamaxesha awahlukeneyo, le Imodeli iya kufika enegama iGold Fold ezivenkileni. Ke emva kwamarhe amaninzi malunga negama elinokuthi igama laseKorea likhethe, kubonakala ngathi babhejile egameni esalivile kakhulu.
Ke kwiiyure ezimbalwa, Uyayibona iGPS S10 ngokupheleleyo ngale Galaxy Fold ukusuka kwi-Samsung. Yifowuni yokuqala yokusonga emarikeni, ephambi kwezinye izimbangi ezinje ngeHuawei, eza kuthi thaca eyabo kwi-MWC 2019 kule veki.
Le modeli yenye yezona zinto ziphambili kwezi veki, ukuba ividiyo yokwazisa avuza ngayo. Kodwa ngoku, isiqinisekiso sokuba igama lakho liya kuba yiGolden Fold Yinto ekudala ilindelwe. Emva kwamagama afana neGalaxy X okanye i-Galaxy F.
Isamsung icebisile buyisa isikhundla sayo njengenkampani entsha kwintengiso kwi-2019. Ke ngoko, ukuboniswa kwale Galaxy Fold kubalulekile kwinkampani. Kuba ngale ndlela baya kuba nakho ukubuyela kwesi sikhundla, okanye ubuncinci kuya kubanceda kwinkqubo yokufezekisa.
Kwiiyure ezimbalwa, ekupheleni kosuku, sinako yazi iGolden Fold kunye neGPS S10 kule ntetho evela kwi-Samsung. Olunye udidi olulindelweyo kwisiqingatha sokuqala sonyaka ekugqibeleni luya kuba sesikweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iselfowuni esongelayo yeSamsung iya kubizwa ngokuba yiGolden Fold
IVivo U1: Uluhlu olutsha lokungena kwebhetri
I-OPPO kunye no-Nokia basayina isivumelwano selayisensi yelungelo elilodwa lomenzi wechiza